Igumbi le-apula - I-Airbnb
Ikamelo e-indawo esepulazini ibungazwe ngu-Tea
Ikamelo lakho elivulekile eline-fireplace yegesi lisekhaya lomndeni, elitholakala ehlathini elinelanga, lihlehliswe ngokuthula emgwaqeni oyinhloko wokufinyelela okulula e-Beachcombers, e-Gibsons, B.C. Jabulela wonke amasevisi ale dolobha eliseceleni kolwandle. Eduze nebhishi nezitolo zendawo kodwa zibekwe ehlathini. Ikamelo elinokufinyeleleka kwezihlalo zabakhubazekile elinombhede omkhulu, insila evulekile, indlu yokugezela inamasondo eshaweni nezinsimbi zokubambelela engqondweni. Ikhebula/i-Netflix/i-YouTube/i-WiFi, umshini wekhofi netiye. Kukhona imali engu- $ 20 yesilwane ngasinye esifuywayo esinobungane ubusuku ngabunye.
I-suite itholakala ekhaya.
Indawo yokupaka ephephile yangasese, amachibi ama-2 okubuka impilo yamachibi kanye nemindeni yezinyamazane ezivame ukuhlala kule ndawo. Jabulela itiye elisha eliphekiwe noma ikhofi endaweni engaphambili ebheke elinye lamachibi. Izinkukhu nezinyosi zisebenza kanzima usuku lonke. Thatha okuthile engadini, amajikijolo noma i-apula kwesinye sezihlahla eziningi ongakhetha kuzo. Uhambo lwemizuzu emi-5 ukuya enkundleni yokudlala yesikole. Ukuhamba ibanga ukuya eBrewhouse kanye neDistillery. Jabulela igalofu noma ukuhamba ngebhayisikili entabeni. Gxumela kwelinye lamachweba ungene olwandle oluhle. Izinkanyezi ziyabenyezela esibhakabhakeni ebusuku.
4.97 · 322 okushiwo abanye
Ukuhamba ibanga lokuya egrosa nasezitolo zikabhiya newayini. Ukudla okusheshayo, isitolo sezidakamizwa, igalaji likaphethiloli kanye nesinema konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba lapho uhlala khona. Ukushayela imizuzu emi-5 ukuya e-Lower Gibsons ngomfanekiso ka-Molly's Reach ovela ohlelweni lwe-TV i-Beachcombers.
Umnikazi uzotholakala 24/7 futhi uhlala esakhiweni.
Izinga elincane lomsindo womndeni okufanele lilindelwe.